बादलतर्फ संकेत गर्दै प्रचण्डले भने: म माथि बम प्रहार गर्नेलाई गृहमन्त्रि बनाएर गल्ति गरे! – Newsharpal24
April 7, 2021 adminLeaveaComment on बादलतर्फ संकेत गर्दै प्रचण्डले भने: म माथि बम प्रहार गर्नेलाई गृहमन्त्रि बनाएर गल्ति गरे!
उनले आफूलाई दुःखमा साथ दिनेहरुलाई साद दिनुको साटो अवसरवादीहरुलाई ठाउँ दिएको भन्दै आफूबाट गल्ती भएको स्विकार्दै आत्मआलोचनासमेत गरे । उनले भने,‘मलाई दुःखमा बचाउने, जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा साथ दिनेहरु अलिक ओझेलमा पर्नुभयो, तर जालीझेलीहरुलाई मैले अवसर दिएँ । म बाट गल्ती भएकै हो ।
मलाई गद्दार भन्नेहरु, २०७० को चुनावमा ममाथि बम प्रहार गर्ने साथीहरुलाई, गृहमन्त्री बनाएँ, तिनीहरु अहिले विकाउ माल साबित भए, मैले तपाईँहरुलाई नै अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । नियुक्ती र पार्टीमा पदोन्नती गर्दा, या मन्त्री बनाउँदा आफूलाई दुःखमा साथ दिनेहरुलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । म बाट गल्ती भएकै हो । म आत्मआलोचना गर्छु ।